Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo Dagaal culus ku dhex maray Gobolka Gedo - Awdinle Online
Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda oo Dagaal culus ku dhex maray Gobolka Gedo
December 1, 2019 (Awdinle Online) – Magalada degmada Baardheere ee Gobolka Gedo Wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in dagaal culus oo u dhaxeeya Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab uu ka dhacay tuulooyin hoos-taga Baardheere.
Dagaalkan ayaa yimid, kaddib markii ciidanka dowladda ay ku baxeen deegaanka Baar Macalin iyo deegaano kale oo Al-Shabaab ka wadeen uruurinta xoolaha zakawaadka loo yaqaano.
Isku duwaha Beeraha Maamulka Jubbaland ee u qaabilsan Baardheere Saciid Abshir Cartan ayaa sheegay in dagaalka uu ka dambeeyay, markii dadka deegaanka ay cabasho u soo gudbiyeen dad xoolo dhaqato ah oo Al-Shababa si xoog leh uga qaateen xoolo.
Waxaa uu sheegay in dagaalka Al-Shabaab uga dileen tobaneeyo, ayna dhanka dowladda kaga geeriyoodeen labo askari.
Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegay inay iska difaaceen weerar ay sheegeen in ciidamada Itoobiya ku soo qaadeen, iyaga oo doonaya inay kala waregeaan xoolo ay ku sheegeen inay ahaayeen Zako.
Previous articleXisbiga Himilo oo Qorsheynaya in Magacaabaan Xoghaye Cusub
Next articleXildhibaan Fiqi “Gabre Shaqadiisi, iyadoo billaa Gabre ah ayay dalka ka socotaa”